Olona manisa mpanamboatra fakan-tsary sy mpamatsy - China Manisa orinasa mpamokatra fakantsary
Ity dia rafitra fanisam-bahoaka izay mampiasa ny haitao AI hijerena faritra midadasika, Maro amin'ireo mpanisa ny Crowd no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny kaontera Crowd anay. Ny rafitra fanisam-bahoaka AIC198 AI dia mampiasa algorithm fahitana AI, miaraka amin'ny asan'ny kalibration 3D, izay afaka manatsara ny fahitsiana sy ny hafainganam-pandeha, ny alim-pikatrohana AI eo alohan'ilay any ivelany ...
HPC199 AI Vehicle counter dia fiara manisa izay manisa fiara miditra sy mivoaka. Azo ampiasaina koa izy hanisa zavatra hafa na ampiasaina ho an'ny olona manisa. Betsaka amin'ireo mpanamory fiaran'ny Vehicle no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny kaontera fiaranay. HPC199 AI Vehicle counter dia manana chip fikirakirana AI namboarina, izay afaka mamita tanjona tsy miankina ...
Maro amin'ireo fakantsarantsika manisa loha no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasana vaovao misimisy kokoa momba ny fakantsarantsika manisa loha. Ny fakan-tsarimihetsika lohan-doha HPC010 dia mampiasa maodely algorithm ho an'ny fakan-tsary avo lenta namboamboarina mba hamantarana mavitrika ny fizarana, ny haavony ary ny làlan'ny fivezivezena kendrena, amin'izay dia ahazoana angon-drakitra mandehandeha amin'ny mpandeha an-tserasera ary Huawei namboarina ...
Kaontera 3D olona ity, izay olona mandroso 3D manisa milina eny an-tsena, ary manome koa ny fifehezana ny fibodoana, maro amin'ireo rafitra manisa ny Vahoaka no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasao aminao antsipiriany misimisy momba ny rafitry ny fanisam-bahoaka. Ny rafitra manisa olona HPC009 dia mampiasa maodely algorithm ho an'ny fakan-tsary avo lenta namboarina ho azy mba hamantarana mavitrika ...
Ity fakan-tsary manisa People ity no vokatra kintarinay. Napetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shanghai Pudong. Nitafa tamina fahitalavitra Shanghai ihany koa izy ary nantsoina ho teknolojia mainty, ity ity horonantsary ity ho an'ny vaovao: Maro amin'ireo Vahoakanay manisa fakan-tsary no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasa anao antsipiriany misimisy momba ny fakantsarin'ny olona manisa anay. HPC008 Ny olona manisa fakan-tsary dia mitovy amin'ny ...